Yakatumirwa ne Tranquillus | Apr 5, 2021 | Pamusoro pewebhu
Zvibvumirano zvekubatana: mushandirwi uyo asingaremekedze zvibvumirano pane zvakagadziriswa zvenguva-yebasa
Iyo modulated chikamu-yenguva system inoita kuti zvikwanise kuchinjisa iyo yekushanda nguva yemushandi-wenguva-nguva mushe zvinoenderana yakakwira, yakaderera kana yakajairwa nguva yebasa rekambani pamusoro pegore. Kunyangwe iyi sisitimu isisakwanise kuitwa kubva muna2008 (mutemo n ° 2008-789 waAugust 20, 2008), ichiri kunetsekana nemamwe makambani anoenderera nekushandisa chibvumirano chakawedzerwa chekubatana kana chibvumirano chekambani chakagumiswa pamberi pezuva iri. Nekudaro chokwadi chekuti kumwe kupokana pamusoro penyaya iyi kuri kuramba kuchikwira pamberi peDare reCassation.
Chazvino fananidzo nevashandi vakati wandei, vanogovera mapepanhau pasi pemakondinendi emamwe-enguva, avo vaive varevera kumatare evashandi kuti vakumbire, kunyanya kuiswazve zvibvumirano zvavo seCDI yakazara-nguva. Vakaomerera kuti mushandirwi wavo akange aderedza nguva yavo chaiyo yekushanda, uye kuti yaive yakakura kudarika huwandu hwemaawa ekuwedzera anotenderwa nechibvumirano cheboka (kureva 1/3 yesungano yechibvumirano).
Mune ino kesi, chaive chibvumirano chakabatana chemakambani ekuparadzira akananga aishanda. Saka zvinoratidza kuti:
« Kufunga nezve izvo zvakasarudzika zvemakambani, evhiki kana emwedzi ekushanda maawa ...
Zvibvumirano zvekubatana: ndeipi mhedzisiro kana akashandurwa mushandi-wenguva-nguva mushandi achishanda kupfuura nguva yakagamuchirwa July 8th, 2021Tranquillus
VERENGA Gadzira microenterprise - Yemahara dzidziso
pashureBasa repasina: mitengo inoshanda muna Kubvumbi
zvinoteveraRuzivo musangano - Nyanzvi shanduko
Shanduko yehunyanzvi hwekudzidzira: chii chaunofanira kurangarira!
Matanho ekugadzirira kudzingwa kwababa mushure mekuzvarwa kwemwana wavo
Iwe unodzidzisa sei (munhu mukuru) kunyora zvakanaka muchiFrench?
Iyo yekuchengetedza inosungirwa semuganhu kurusununguko rwekubatana kwekutaurirana